एक ओभरको एलिमिनोटरमा बुटवलको जित,काठमाडौंको दोस्रो हार - Kheladi News Kheladi News
एक ओभरको एलिमिनोटरमा बुटवलको जित,काठमाडौंको दोस्रो हार
मंसिर ३० गते २०७६ मा प्रकाशित
पोखरा(खेलाडी न्युज)-बुटवल ब्लाटर्सले काठमाडौं गोल्डेन्सलाई सोमबार पराजित गर्न एक ओभरको एलिमिनोटर खेल्यो । खेल निर्धारित २० ओभरमा दुवै टोलीले समान १४० रनको स्कोर तयार गरेपछि नजिताको लागि एक ओभर एलिमिनोटर खेलिएको थियो । एक ओभरमा बुटवल व्लार्टसले १२ रन बनाएको थियो । हर्स टंकले दुई चौकासहित १२ रन बनायो । जवाफी व्याटिङ गरेको काठमाडौं भने २ रन बनायो । एक विकेट गुमायो । अविनाश बोहोराले स्ट्राईकमा रहेका कप्तान मल्ललाई आउट गरे । उनले एक ओभरमा दुई रन मात्रै खर्चिए । बुटवलले जित आत्मसात गर्यो ।
अन्तिम बलमा जितको लागि एक रन चाहिएको अवस्थामा बुटबल ब्लाटर्सका विपिन खत्री आउट भएपछि सम्भावित जित नजिक पुगेर काठमाडौं गोल्डेन वारियर्ससँग बराबरी(टाई) हुन पुगेको थियो । काठमाडौंले दिएको १४१ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बुटबल ७ विकेटको क्षतिमा पुरै ओभर खेल्दखै १४० रन बनाएपछि खेल बराबरी(टाई) हुन पुग्यो ।
पवन सर्राफको बलमा खत्री आउट भएपछि खेल टाई हुन पुग्यो । अन्तिम ओभरको अन्तिम बलमा खत्री जे. कोल्सावालले स्टम्पिङ आउट गरेपछि खेल टाई भएको थियो । निकै रोमाञ्चक खेलमा जित नजिक पुगेर बुटवल भने अन्त्यमा अंक बाड्न विवश भयो ।
टस हारेर व्याटिङ गरेको काठमाडौंले पोखराको मैदानमा सोमबार ६ विकेटको क्षतिमा १४० रनको स्कोर खडा गर्यो । जें कोल्सावालले २८ रनको महत्वपूर्ण शुरुवाती गरे । उनलाई सुवास खकुरेलले १५ रन बनाउँदै साथ दिएका थिए । खकुरेल रन आउटको शिकार भएपछि जेवाई तोमर क्रिजमा आए । उनी पनि एक रनमै रन आउट हुदैं पभेलियन फर्किएपछि काठमाडौंको इनिङलाई कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सम्हाल्न खोजे । मल्ल पनि व्यक्तिगत १५ रनमै आउट भएपछि आएका अदिल खानले २३ रन हिर्काए । उनले १५ बल खेल्दै एक चौका र एक छक्का हिर्काएका थिए । पवन सर्राफले महत्वपूर्ण इनिङ्स खेल्ने क्रममा ३७ रन बनाए । २१ ब्ल खेल्दै उनले तीन चौका र दुई छक्का व्याट्बाटै ठोक । अमरसिंह राउटेलाले सर्राफसँगै नटआउट रहदै १४ रन बनाए ।
१४१ रनको लक्ष्य पछ्याएको बुटवल ब्लाटर्सलाई एच. टंकले उत्कृष्ठ व्याटिङ गर्दै ४५ रन बनाउँदै सम्भावित जितको आधार तयार बनाए । उनले २९ बल खेले । तीन चौका र तीन छक्का हिर्काए । उनी आउट हुनुभन्दा अघि एस.रानाले २० रन बनाई आउट भए । बुटवलका विकेट किपर शिवम सिंहले ३३ रन बनाई नटआउट रहे । २१ बल खेलेका सिंहले दुई चौका र ३ छक्का हिर्काउँदै जित नजिक पुर्याए । हरिबहादुर चौहानलाई बुटवलले दुईबलमै शून्य रनमा पभेलियन फर्काएपछि क्रिजमा आएका विपिन खत्री पनि विना रन स्टम्पिङ आउट भए । खत्रीले केवल ३ बल सामना गरे ।
ओभरको अन्तिम बलमा जितको लागि एक रन मात्रै चाहिएको अवस्थामा उनी आउट भएपछि खेल बराबरीमै टुंगियो । काठमाडौंका सुशान्त भारी र सुबोध भाटीले दई दुई विकेट लिएका थिए । हर्स टंक खेलमा म्यान अफ दि म्याच घोषित भए । क्विन्ट इभेण्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको आयोजनामा पोखरा रंगशालास्थित क्रिकेट मैदानमा भईरहेको नमस्ते पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करण विजेताले २७ लाख र उपविजेताले १० रुपैयाँ पुरस्कार राशी प्राप्त गर्ने छन् ।
रस्कार राशी प्राप्त गर्ने छन् ।